Jarmalka - Wikipedia
Jamhuuriyadda federaalka ee Jarmalka
- Madaxwayne Frank-Walter Steinmeier
- Total 357,021 km²
- Biyo (%) 2.416
- 2012 qiyaas 83,305,856
- Total $3.945 trillion (4th)
- Per capita $44,550 (17th =)
Jamhuuriyadda federaalka ee jarmalka ama Jarmalka waa wadan u dhisan dhinaca federaalka, waxoona ka koobanyahay 16 Gobol. Wadankaan waxoo ku yaalaa Bartamaha qaarada Yurub, waxoona xad la wadaagaa wadamada Faransis ka, Denmark, Luksemburg, Beljim, Holland, Switzerland, Austriya, Jamhuuriyadda Czech iyo Boland. Magaalo madaxda wadanka waa Berlin. Wadanka jarmalka markiisa hore woo kala qeebsanaa, waxeena isku keentiisa ee dhamaatay 1871dii, dagaaladii aduunka kii labaad ayaa wadanka jarmalka la kala qeebiyay ka bilaabato 1949kii ilaa 1990kii, waa markii oo wadanka mar kale midoobay. Jarmalka waxoo leeyahay Taariikhda ugu dheer ee qaarada Yurub. Wadanka jarmalka waxaa degen dad gaaraayo ilaa 83miliyan oo qof, waa wadanka ugu dadka tirada badan qaarada Yurub, waana wadanka Ugu dhaqaalaha xoogan qaarada Yurub, Dhaqaalaha jarmalka waa dhaqaalaha sadaxaad oo ugu weyn aduunka, waxoo ku xigaa mareykanka iyo Jabaan. Wadankaan waa wadanka ugu dhoofiska badan matoorka qaarada Yurub.
2 Kofka deggan Jarmalka Waddnamaha
4 Juqraafi ahaan
Kofka deggan Jarmalka Waddnamaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Wadanka Jarmalka waa wadanka ugu taariikhda dheer Yurub, waxaana laga helay dadkii horay u degenaan jiray raadkoodii 700,000 oo sano kahor. Dadkii biniaadanka hadda jiro ka xooganaa, oo la dhihi jiray Neanderthal intii eesan isku bedelin biniaadanka hadda jiro 40,000 oo sano ka hor , waxee ku noolaan jireen wadanka Jarmalka.
Juqraafi ahaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Juqraafi ahaan wadanka Jarmalka waxa uu kuyaalaa Bartamaha iyo Galbeedka Qaarada Yurub, waxa uuna xuduud la leeyahay wadanka Denmark dhanka waqooyi, Boland iyo Jamhuuriyada Jeeg dhanka Bari, Austriya iyo Iswisarland dhanka koonfureed, Faransiiska iyo Luksemburg dhanka Koonfur Galbeed, Beljim iyo Holland dhanka Waqooyi Galbeed.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarmalka&oldid=235281"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 May 2022, marka ee eheed 00:38.